काठमाडौं महानगरको सहयोगमा कान्तिमा अक्सिजन प्लान्ट, चालू आवमै बनिसक्ने – Health Post Nepal
काठमाडौं महानगरको सहयोगमा कान्तिमा अक्सिजन प्लान्ट, चालू आवमै बनिसक्ने
२०७६ कार्तिक २२ गते १७:५१
सरकारीस्तरको मुलुककै एक मात्र केन्द्रीय बाल अस्पताल कान्तिमा अक्सिजन प्लान्ट सुरु हुने भएको छ । महाराजगन्जस्थित अस्पतालले काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट सुरु गर्न लागेको हो । शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको रोहबरमा अस्पताल र महानगरबीच चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अक्सिजन प्लान्ट निर्माण सम्झौता भएको हो ।
अक्सिजन प्लान्टको लागत महानगरले बेहोर्ने भएको छ । महानगरले हालका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटले नपुगेमा अपुग रकमसमेत आफैँले उपलब्ध गराउने सम्झौता महानगरले गरेको छ । अस्पतालले अक्सिजनमा मात्र वार्षिक करिब ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।
अस्पताल भवन पुनर्निर्माणका विषयमा आजै समाधान निकाल्छु : मन्त्री पोखरेल
सम्झौता कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले अस्पताललाई सुदृढ बनाउन आफ्नो तर्फबाट सकेजति सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीका हैसियतले मात्र नभई आफू अस्पताल रहेको क्षेत्रको जनप्रतिनिधि भएका कारण पनि अस्पतालका समस्या समाधानमा आफू सधैँ केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो ।
‘निर्माणाधीन अस्पताल भवनमा रेड स्टिकर टाँसिएको विषयमा समाधानका लागि आजैबाट अग्रसर हुन्छु,’ मन्त्री पोखरेले भने, ‘आजै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुखसँग बसेर यो विषयको समाधान निकाल्छु ।’ मन्त्री पोखरेल कान्ति अस्पताल रहेको काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।
सम्पदा संरक्षण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत काम गरिरहेको महानगरले मानवताको कामको पनि सुरुवात गरेको काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बताए । ‘अक्सिजन प्लान्टका लागि आवश्यक सम्पूर्ण खर्च महानगरपालिकाले बेहोर्छ,’ मेयर शाक्यले भने ।
निर्देशक डा. बिच्छाले गनाए ४ महिनाको उपलब्धि
कार्यक्रममा अस्पतालका निर्देशक डा. आरपी बिच्छाले आफूले नेतृत्व सम्हालेयताका ४ महिनामा अस्पतालले गरेका उपलब्धि, समस्या तथा भावी योजनाबारे जानकारी दिए । उनले अस्पतालमा २४सै घण्टा ब्लड बैंकको सुरुवात गरेको, बिरामी कुरुवाघर बन्ने सम्झौता भएको तथा मेन्टल हेल्थको भवन बन्न लागेको जानकारी दिए । १० बेडको पेडियाट्रिक इन्टरमेडिएट केयर स्थापना गरेर बेड अभावका कारण बिरामी रेफर गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्लेख्य सुधार ल्याएको उनको भनाइ थियो ।
अस्पतालले दुई साताअघि मात्र ब्लड बैंकको स्थापना गरेको छ । अस्पतालले वार्षिक रुपमा ६३ लाखको अक्सिजन किन्दै आएको जानकारी दिँदै डा. बिच्छाले अक्सिजन प्लान्ट निर्माणमा सहयोगका लागि काठमाडौं महानगरप्रति आभर व्यक्त गरे । सम्झौता कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो ।